New Ngwaahịa na-abịa
site ha na 20-10-17
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị tinyere ego USD500,000 na ngalaba R & D maka ngwaahịa ọhụrụ anyị: mgbapụta mmiri micro maka igwe disinfection, mgbapụta mgbapụta maka ventilat ọgwụ, brushless mmiri ọkụ na-agbapụta mgbapụta, obere ihe nrụpụta mmiri na-agba mmiri maka ịsa ahụ, mgbali mgbata mmiri pipeline. pum ...
E jiri ya tụnyere gburugburu ebe obibi, njupụta nke azụ dị na akwarium buru oke ibu, ma azụ azụ na nri fọdụrụ karịa. Ihe ndị a na-emebi ma hapụ amonia, nke kachasị emerụ azụ. Dika ihe ojoo, karia ammonia, na ...
Dị ka ọrụ ọrụ si dị, ikuku oyi nwere ike kere n'ime ntuziaka ụkpụrụ na akpaka ụkpụrụ. 1) The ntuziaka ukpụhọde mode bụ ịgbanwe arụmọrụ parameters nke ofufe ma ọ bụ shutter site ntuziaka ọrụ, dị ka imeghe na-emechi ndị ofufe ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe ofufe agụba n'akuku, spe ...
Ma YUANHUA ụlọ ọrụ, anyị R&D ngalaba na-mgbe niile na-emepe emepe ọhụrụ ngwaahịa, nke izute chọrọ nke dị iche iche ahịa na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ahịa. O juru anyi anya na ogwu ohuru ohuru metutara ya, ulo oru uzo aquarium na uzo ahia nke ndi ozo di ike n’aho a, ma ...